Justin Trudeau: “Canada iyo USA waa laba dal oo kala go’an, Qaxootiguna waa…” – Kasmo Newspaper
Justin Trudeau: “Canada iyo USA waa laba dal oo kala go’an, Qaxootiguna waa…”
Updated - January 15, 2017 9:41 am GMT
London (Kasmo), Iyada oo uu soo dhowaaday caleemasaarkii Donald Trump iyo sidii loo fahmi lahaa tillaabadiisa siyaasadeed ee u horreysa ee soogalootiga ayaa Canada xoojinaysaa siyaasadeheeda soo dhoweynta.
Taasina waxay ka muuqataa ereyada iyo tillaabada uu qaaday Ra’iisal Wasaaraha Liberal-ka ah Justin Trudeau oo loo macnayn karo weerar toos ugu dhacaya, isaga oo an la magac dhabin, Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa jawaab qeexan ka bixiyay, mar uu la hadlayay koox dhallinyaro ah, su’aasha saamaynta doorashada Trump ku yeelan karto xiriirka dalkiisa kala dhexeeya.
Wuxuuna degmada Belleville ee Ontario ka cadeeyay isaga oo yiri: “dib uga laaban mayo difaacidda qaddiyadaha an aaminsanahay”, wuxuuna ku daray: “Canada iyo USA waa 2 dal oo kala go’an”.
Wuu kale oo raaciyay: “soogalootigu waa isha aynu ka heleyno hodantinimada; Muslimiinta reer Canada-na waa qayb an looga maarmin horumarka dalka, maanta iyo barriba.”
Marka lagu daro magacaabista dhowaan Axmad Xuseen oo la ogyahay sida uu uga soo horjeedo Trump, waxay u dhigmaysaa tillaabo Ra’iisal Wasaare Trudeu isaga fogaynayo siyaasadaha Trump.
Axmad Xuseen oo 39 jir ah kana soo jeeda Soomaaliya wuxuu Canada ku soo galay, isaga oo 16 jir ah, qaxooti-nimo, sannadkii 1993kii, waxaana dhowaan loo magacaabay Wasiirka Socdaalka, Soogalootiga iyo Jinsiyadaha.
Sannadka 2017ka gudihiisa Canada waxaa u qorshaysan in tirada soogalootiga la gaarsiiyo 300,000, oo intooda badan sababo dhaqaale loo qaadanayo.
Xuseen wuxuu baddelayaa ruugcaddaaga siyaasiga ah John McCallun oo qaban doona xilka Safaaradda Canada ee Shiina, ka dib shaqadii ballaarnayd ee Xukuumadda Trudeau kala soo qabtay, sidii 39,000 oo qaxooti reer Suuriya ah loo keenay, 13kii bilood ee u dambeysay.